A kwadoro Exynos 880 ịbụ chipset nke Vivo Y70s 5G ga-eji | Gam akporosis
Samsung na-etolite ikpo okwu mkpanaka ọhụrụ nke ga-ada ahịa n’afọ a dị ka Exynos 880. daysbọchị ole na ole gara aga, chipset a dị ike pụtara na Geekbench nchekwa data na ụdị Vivo. Igwe asịrị echeghị ikwu na ọ bụ maka Ana m ebi Y70s 5G, ekwentị mkpanaaka mbu enwere ike iji ya n'oge na adighi anya.
Onye nrụpụta China, na njem na nso nso a, ekpughela akwụkwọ mmado ọhụụ maka ama ama ọzọ, nke ọ na-ekwupụta ya n'ụzọ doro anya, yabụ obi abụọ adịghị ya na ụbọchị mmalite ya dị ezigbo nso, a ga-ekwupụta ya n'oge na-adịghị anya. Ihe omuma a na - ewepu ohere iji gosiputa obere akuku nke ekwentị.
Ọhụrụ nkwado ihe na-egosi na Vivo Y70s 5G ga-abata na agba agba agba nke pink na acha anụnụ anụnụ. Na ihu, a na-enweta etiti dị n'etiti etiti na ihuenyo nwere ntụpọ. Ọnụnọ nke onye na-agụ akara mkpịsị aka n'akụkụ bụ ezigbo ihe ngosi na-enyekwa ya ngalaba teknụzụ IPS LCD IPS. Tụkwasị na nke ahụ, egosiri na azụ igwe nke ngwaọrụ nwere igwefoto okpukpu atọ na igwefoto MPN 48 tinyere ọkụ LED, batrị 4.500 mAh, 8 GB nke RAM na 128 GB nke ROM, na SoC ndị a kpọtụrụ aha na mbụ.
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ Exynos 880 chipset bụ nsụgharị edochi nke amaraworị Ọnụ ego nke 980. Nke a pụtara na ọ bụ ihe nhazi nke ihe nkọwa ahụ, mana ya na ntọala nkeji elekere dị na ụyọkọ ya, ya mere ọ ga-eji ezi uche gosipụta arụmọrụ ọsọ ọsọ. Agbanyeghị, ọ nweghị ihe gọọmentị banyere ya ma, yabụ kwesịrị ịkpachara anya nke a ruo mgbe Samsung ga-ekpughe ihe doro anya.
Asịrị a dabere na ule Geekbench gosipụtara na mbụ, nke a gosipụtara Vivo nwere akara ngosi V2002A, nke ekwuru na ọ bụ otu ekwentị a na Exynos 880. N'otu aka ahụ, asịrị a kwadoro na ọ bụ eziokwu na akwụkwọ mmado ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ekwupụtabeghị Exynos 880 ọzọ ka ọ bụrụ chipset nke Vivo Y70s 5G ga-eji